Puntland oo ka hadashay xiisadda ka dhalatay xil ka qaadista Agaasimihii PSF | Dhacdo
Home Wararka Maanta Puntland oo ka hadashay xiisadda ka dhalatay xil ka qaadista Agaasimihii PSF
Puntland oo ka hadashay xiisadda ka dhalatay xil ka qaadista Agaasimihii PSF
Madaxtooyada Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xiisadda ka dhalatay xil ka qaadista lagu sameeyay Agaasimihii Hay’adda PSF, General Maxamuud Cismaan Diyaano, oo laga dareemay Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa 24-kii bishii November xilka ka qaaday Agaasime Diyaano, isagoona xilkaasi u soo magacaabay S/guuto Maxamed Amiin Cabddulahi Xaaji Khayr, ha yeeshee Agaasimaha xilka laga qaaday ayaa sharci-darro ku tilmaamay xil ka qaadistiisa.
Warsaxaafadeed saqdii dhexe ee xalay ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa marka hore loogu mahadceliyay cid kastoo isku dayday inay General Maxamuud Cismaan ku qanciso inuu xilkaasi u wareejiyo si nabada.
Warka waxaa lagu sheegay in Ciidanka PSF ay ka mid yihiin laf dhabarta hay’adaha amniga ee Puntland, ayna ka qayb qaataan sugidda amniga, isla-markaana ay u diyaarsan yihiin la dagaalanka kooxaha argagixisada.
“Ciidanka PSF (Puntland Security Forces) waxay ka mid yihiin laf dhabarta hay’adaha amniga Dowladda Puntland, iyagoo ka qayb qaata sugidda amniga guud ee Puntland, gaar ahaan la dagaalanka ururada argagixisada ah. Dowladda Mareykanka ayaana si gaar ah uga taageerta PSF dhinacyada tababarada iyo qalabka ciidanka.” Ayaa lagu sheegay warka.
Warka ayaa lagu yiri “Ciidanka PSF iyo hantidooda oo leh hub, gaadiid, guryo iyo agab kaleba waxaa hantida Dowladda Puntland iyo shacabkoodu leeyihiin, ayna u soo dhinteen, una soo dhaawacmeen tiro fara-badan oo naftood hurreyaal ah, iyagoo difaacaya amniga iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa reer Puntland.”
Puntland ayaa nasiib darro ku tilmaamtay Odayaashii Dhaqanka ee Talaadadii sheegay in hubka iyo hantida ciidanka amniga Puntland uu si gaar ah u qaato Agaasimihii hore ee PSF-ta, arrintaasi oo meel ka dhac ku ah baa warka lagu yiri sharafta dowladnimo, khatarna gelinaysa amniga iyo xasilloonida Puntland.
Puntland ayaa Agaasimihii hore ee PSF-ta ugu yeertay in sida ugu dhakhsiyaha badan uu u wareejiyo hantida ciidanka, kuna wareejiyo ciidanka iyo Agaasimaha cusub.
“Haddaba Dowladda Puntland waxay faraysaa Agaasimihii hore ee PSF, Mudane Maxamuud Cismaan Diyaano inuu sida ugu dhakhsaha badan u wareejiyo dhammaan hantida Hay’adda PSF, kuna wareejiyo Ciidanka PSF iyo Agaasimaha cusub.” Ayaa lagu sheegay warka.
Ugu dambayn Puntland ayaa sheegtay inay ka go’an tahay dhawrista dastuurka, ilaalinta amniga, xasilloonida iyo xoojinta dowladnimada & sareynta sharciga.
“Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxaa, iyadoo dhawraysa dastuurka iyo sooyaalka dowladnimo ee Puntland ka go’an ilaalinta amniga, xasilloonida iyo xoojinta dowladnimada iyo sareynta sharciga.” Ayaa warka lagu soo geba-gabeeyay.
Previous articleAbiy Ahmed oo markan ciyaaraya qorshe uu cadaadis ku saarayo Mareykanka
Next articleSomaliland oo digniin u jeedisay dadka ka qaybgelaya siyaasadda Somaliya